Kaneecada Killer Siraaj PJS-LFD - Shiinaha xeebaha geeska Afrika PJS Technology
Kaneecada Killer Siraaj PJS-LFD
√.FAN nuugid mabda'a: The dilaaga kaneecada cusub ee la casriyeeyay waxaa loogu talagalay masaf nuugid xoog leh oo il iftiin sare LED, wax ku ool ah waayo xerogeliso kaneecada iyo iyaga oo caanonuug galay laambadda, ay biyuhu doonaa oo ugu danbeyn ku dhiman.
√.SAFE & NONTOXIC: The laambad kaneecada LED ansixiyeen jidka jirka si ay u disho kaneecada. sunta No, kiimikooyin waxyeello leh ama shucaaca, 100% ammaan ah meydadka aadanaha iyo xayawaanka, xalka gacanta ku cayayaan aad u soo kobcaya, saaxiibtinimo iyo kharash-ool ah.
√.EASY LOO ISTICMAALO & NADIIF: Powered by cable USB, lagu rakibaa gelin karo korontada, computer ama telefoon kasta oo xeedho mobile. sanduuqa keydinta awoodda Large wax fudud in meesha laga saaro, waayo, nadiifinta iyo fogeynta kaneecada dhintay by maroojinta fudud.
√.USER-saaxiibtinimo Design: Waxaa jira weel yar ugu sareysa, haddii loo baahdo, aad ka saari kara cover yar in ay ku riday adag ama dareere ka celisa cayayaanka saamayn fiican. taageere ayaa dhisay-shaqayn doonaa aamusnaan, ma buuq weyn in ay carqaladeeyaan hurdo aad u qiimo badan.
ARJIGA √.WIDE: Great si loogu isticmaalo gudaha, sida guriga, qolka hurdada, qolka fadhiga, jikada, xafiiska, bakhaarada, hotel, iwm hortagaa duqsigu / cayayaanka looga xumaado oo cudur-waday. Perfect kaneecada, cayayaanka yar yar, dukhsiga iyo cayayaanka kale.
EXW Price: US $ 4.36- $ 4.68 / gogo '
MOQ: 100 gogo '
item Name Kaneecada Killer Siraaj
Qaab Qaab likaha
Danab Input / Current 5V / 1A
ujeedada Design kartoo
Baako 1pcs / sanduuqa, 24pcs / kartoonka
USB Powered ku shaqeeya by computer, laptop, bangiga xoog, adabtarada USB iyo wixii la mid ah, haboon in aad isticmaasho
Arjiyada qolka hurdada Living Home Office Jikada Restaurant Garden Guriyed Yard
SAFE & NONTOXIC sunta No, kiimikooyin waxyeello leh ama shucaaca, 100% ammaan ah meydadka aadanaha iyo xayawaanka
Body Waxyaabaha ABS / PP
Taageere nuugid mabda ' taageere nuugid xoog leh oo il iftiin sare LED
cable USB Haa
Miisaanka Net (kg) 0.36
Shipping Culayska (kg) 0,65
Previous: Kaneecada Killer Siraaj PJS-KL193
Next: Kaneecada Killer Siraaj PJS-PC006
hurdada Kaneecada Night Siraaj
E27 15w Kaneecada Killer Siraaj
Electric cayayaanka Killer Dilkii kaneecada
Electric kaneecada Killer
Electric kaneecada Killer Siraaj
Electronic kaneecada Killer
Electronic kaneecada Killer Night Siraaj
Garden Solar kaneecada Killer Siraaj
cayayaanka kaneecada Killer Night Siraaj
hoggaamiyo Kaneecada Killer Siraaj
hoggaamiyo Kaneecada Siraaj
Hogaaminayo Kaneecada Zapper
Kaneecada Killer Oo Night Siraaj
kaneecada Killer Caagga ay hogaaminayaan
Kaneecada Killer hoggaamiyo Night Light
kaneecada Night Siraaj
Trabatoni Kaneecada Iyadoo UV Light
Night Siraaj Iyadoo kaneecada Killer
dibadeed Kaneecada Killer
dibadeed Kaneecada Zapper
dabayn Electric kaneecada Killer
dabayn kaneecada Killer
dabayn Kaneecada Killer Siraaj
Solar Kaneecada Killer
Solar UV kaneecada Siraaj
USB kaneecada Killer Siraaj
USB dabayn Kaneecada Killer Siraaj
UV Siraaj Kaneecada Killer
UV Light kaneecada Killer Siraaj
UV Light kaneecada Trabatoni
Kaneecada Killer Siraaj PJS-KL193
Kaneecada Killer Siraaj PJS-KL191
Kaneecada Killer Siraaj PJS-GM
Intelligent Light Kaneecada Killer Siraaj PJS- EP009
Kaneecada Killer Siraaj PJS-1601.
Kaneecada Killer Siraaj PJS-qod39